ဒီလ ထီထိုးဖြစ်အောင် ထိုးပါ ..ကျပ်သန်း (၂၅၀) အပိုဆု ပါတယ် – Daily Feed MM
ဒီလ ထီထိုးဖြစ်အောင် ထိုးပါ ..ကျပ်သန်း (၂၅၀) အပိုဆု ပါတယ်
Admin_John | June 28, 2020 | News | No Comments
ဇွန် လအတွက် ထီလက်မှတ် များအား “က’’ အက္ခရာ မှ “ကစ” အက္ခရာ အထိ စုစုပေါင်း အက္ခရာ ၃၉ လုံးရောင်းချခဲ့ပြီး အကုန်ရောင်းကုန်ခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနက ကြေညာလိုက်သည်။ ထို့အပြင် သတ်မှတ်ကာလတွင်လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသော ဘဏ္ဍာသိမ်းငွေမှ ကျန်းသန်း ၂၅၀ ကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက် တွင် ကျင်းပမည့် ၁၇ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီသိန်းဆုဖွင့်ပွဲတွင် ထပ်တိုးချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ပြည်တွင်းအခွန်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “COVID-19 ကာလ မှာ လူတွေ အိမ်ပြင်မထွက်ကြတဲ့အချိန်ထီလက်မှတ် တွေ အများကြီး ရောင်းမကုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုဇွန်လမှာတော့ ထီလက်မှတ် အကုန်ရောင်းကုန်ခဲ့လို့ ထီ
လက်မှတ်ရောင်းအား ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ လာမထုတ်တဲ့ ဘဏ္ဍာသိမ်း ငွေ က ကျပ် ၁ ဘီလီယံ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ့ထဲ က ကျပ်သန်း ၂၅၀ ကို ထပ်တိုးဆုမဲ အဖြစ် ဇူလိုင် ၁ ရက် နေ့ ဆုမဲတွေ မှာချီးမြှင့်သွားမှာပါ’’ ဟုပြော။
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မေလတွင် ရောင်းမကုန်သည့် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ် ၆ သိန်းကျော် ရှိခဲ့ပြီး ဧပြီလတွင်ရောင်းမကုန်သည့် ထီလက်မှတ် ၁ ဒသမ ၈ သန်းကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၁၇ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ
သိန်းဆုဖွင့်ပွဲအတွက် ရောင်းချရသည့် အက္ခရာ ၃၉လုံးဖြစ်၍ ထီစာအုပ် ၃,၁၉၀,၉၀၂ အုပ်ဖြစ်ပြီး ထီလက်မှတ်စောင်ရေ ၃၅,၀၉၉,၉၂၂ စောင်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထီလက်မှတ်ရောင်းရငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၁၉၀၉. ၀၂၀
ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းရောင်းရငွေထဲမှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေချီးမြှင့်မည့် ဆုငွေမှာ ၁၉၁၄၅. ၄၁၂ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထို့ကြောင့် အထူးဆုကြီး အနေဖြင့် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲ (၁)ဆု ၊ ကျပ်သိန်း တစ်သောင်း (၁)ဆု၊ ကျပ်
သိန်း ငါးထောင် (၂)ဆု၊ ကျပ်သိန်း နှစ်ထောင် (၅)ဆု ၊ ကျပ်သိန်း တစ်ထောင် (၇)ဆု ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ်အနေဖြင့် ကျပ်သိန်းငါးရာ (၁၈)ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ရာ (၂၁)ဆု၊ ကျပ်သိန်း
တစ်ရာ (၂၆)ဆု၊ ကျပ်သိန်း ၅၀ (၂၆)ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ် (၂၉)ဆု၊ ကျပ်ဆယ်သိန်း (၃၂)ဆု၊ ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာဆုမဲစနစ် တွင်ကျပ်သုံးသိန်း (၁၅၀)ဆု၊ ကျပ်နှစ်သိန်း (၁၅၀၀)ဆု၊ ကျပ်တစ်သိန်း (၁၈,၀၀၀)ဆု
ကျပ်ငါးသောင်း (၂၀၀,၀၀၀) ဆုချီးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင်ဘဏ္ဍာသိမ်းရငွေ ကျပ်သန်း ၂၅၀ မှ တစ်ဆုချင်းဆုမဲ ကျပ် ဆယ်သိန်း (၄)ဆု နှင့် ဝေဝေဆာဆာဆုမဲများ ဖြစ်သည့် ကျပ်သုံးသိန်း (၂၀)ဆု၊
ကျပ်နှစ်သိန်း (၂၀၀)ဆု၊ ကျပ်တစ်သိန်း (၂၀၀၀)ဆု၊ စုစုပေါင်း ၂၂၂၄ ဆု ကိုထပ်မံချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနမှ သိရပါသည်။
ဇြန္ လအတြက္ ထီလက္မွတ္ မ်ားအား “က’’ အကၡရာ မွ “ကစ” အကၡရာ အထိ စုစုေပါင္း အကၡရာ ၃၉ လုံးေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အကုန္ေရာင္းကုန္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက ေၾကညာလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ သတ္မွတ္ကာလတြင္လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိေသာ ဘ႑ာသိမ္းေငြမွ က်န္းသန္း ၂၅၀ ကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ တြင္ က်င္းပမည့္ ၁၇ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီသိန္းဆုဖြင့္ပြဲတြင္ ထပ္တိုးခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ျပည္တြင္းအခြန္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက “COVID-19 ကာလ မွာ လူေတြ အိမ္ျပင္မထြက္ၾကတဲ့အခ်ိန္ထီလက္မွတ္ ေတြ အမ်ားႀကီး ေရာင္းမကုန္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခုဇြန္လမွာေတာ့ ထီလက္မွတ္ အကုန္ေရာင္းကုန္ခဲ့လို႔ ထီ
လက္မွတ္ေရာင္းအား ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ လာမထုတ္တဲ့ ဘ႑ာသိမ္း ေငြ က က်ပ္ ၁ ဘီလီယံ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီ့ထဲ က က်ပ္သန္း ၂၅၀ ကို ထပ္တိုးဆုမဲ အျဖစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ ေန႔ ဆုမဲေတြ မွာခ်ီးျမႇင့္သြားမွာပါ’’ ဟုေျပာ။
၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ ေရာင္းမကုန္သည့္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ ၆ သိန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ဧၿပီလတြင္ေရာင္းမကုန္သည့္ ထီလက္မွတ္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၇ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ
သိန္းဆုဖြင့္ပြဲအတြက္ ေရာင္းခ်ရသည့္ အကၡရာ ၃၉လုံးျဖစ္၍ ထီစာအုပ္ ၃,၁၉၀,၉၀၂ အုပ္ျဖစ္ၿပီး ထီလက္မွတ္ေစာင္ေရ ၃၅,၀၉၉,၉၂၂ ေစာင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထီလက္မွတ္ေရာင္းရေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၁၉၀၉. ၀၂၀
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ေရာင္းရေငြထဲမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲေဝခ်ီးျမႇင့္မည့္ ဆုေငြမွာ ၁၉၁၄၅. ၄၁၂ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အထူးဆုႀကီး အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္းခြဲ (၁)ဆု ၊ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္း (၁)ဆု၊ က်ပ္
သိန္း ငါးေထာင္ (၂)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ (၅)ဆု ၊ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ (၇)ဆု ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ဆုတစ္ဆုခ်င္းစနစ္အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္းငါးရာ (၁၈)ဆု၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ (၂၁)ဆု၊ က်ပ္သိန္း
တစ္ရာ (၂၆)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ (၂၆)ဆု၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ (၂၉)ဆု၊ က်ပ္ဆယ္သိန္း (၃၂)ဆု၊ ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာဆုမဲစနစ္ တြင္က်ပ္သုံးသိန္း (၁၅၀)ဆု၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္း (၁၅၀၀)ဆု၊ က်ပ္တစ္သိန္း (၁၈,၀၀၀)ဆု
က်ပ္ငါးေသာင္း (၂၀၀,၀၀၀) ဆုခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ဘ႑ာသိမ္းရေငြ က်ပ္သန္း ၂၅၀ မွ တစ္ဆုခ်င္းဆုမဲ က်ပ္ ဆယ္သိန္း (၄)ဆု ႏွင့္ ေဝေဝဆာဆာဆုမဲမ်ား ျဖစ္သည့္ က်ပ္သုံးသိန္း (၂၀)ဆု၊
က်ပ္ႏွစ္သိန္း (၂၀၀)ဆု၊ က်ပ္တစ္သိန္း (၂၀၀၀)ဆု၊ စုစုေပါင္း ၂၂၂၄ ဆု ကိုထပ္မံခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရပါသည္။
(၂) ပတ်အတွင်း အိမ်အပြင်ထွက်သူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမယ်လို့ ဒေါက်တာ ခင်ခင်ကြီး ပြောပြီ
KBZ ဘဏ်ခွဲမှ ဝန်ထမ်းဟုပြောပြီး ဆရာဝန်မတစ်ဦးထံမှ ကျပ် သိန်း ၅၀ လိမ်လည်ထုတ်ယူ
လူသိနည်းပြီး ဆံပင်အရှည်မြန်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၄)မျိုး
ကျိုက်ထီးရိုး ဆံတော်ရှင်ကို ဖူးမျှော်နိုင်ဖို့ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီ (ကိုယ်တိုင်ဖူးခဲ့ပြီ)
CDM လှုပ်ရှားမှု ပါဝင်သူနှင့် ဦးဆောင် ထောက်ပံ့သူများကို ဥပဒေအရ အရေးယူမည်
မနက်ဖြန်ဖြစ်မယ့် သူဌေးလောင်းများအတွက် ထီဆုငွေ ထုတ်ရမည့် နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်
ဦးမေတ္တာကြီး ရဲ့ ရောဂါဝေဒနာကို ပျာက်ကင်းသွားအောင် ဆေးကုသပေးနိုင်ခဲ့လို့ ဝမ်းသာကြည်နူးနေတဲ့ ထူးခန့်ကျော်